चीन रंग उपकरण निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > रंग उपकरण
रंग उपकरण निर्माताहरु
धेरै रंग उपकरणहरु पेशेवर चित्रकारहरु द्वारा भवन मा रंग लागू गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। केहि पूर्व चित्र को लागी प्रयोग गरीन्छ र केहि चित्रकला को समयमा प्रयोग गरीन्छ। अधिक परिचित रंग उपकरण ऊन ब्रश, रोलर्स, spatulas, आदि सामेल छन्।
त्यहाँ रंग उपकरण को धेरै प्रकार छन्। विभिन्न रंग उपकरण रंग चित्रकला प्रक्रिया मा फरक भूमिका खेल्छन्। उदाहरण को लागी, एक spatula धुलो र दाग हटाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ, काठ काँडा हटाउन वा putty लागू गर्न को लागी; स्यान्डपेपर मुख्य रूपले रंग लागू गर्नु भन्दा पहिले निर्माण सब्सट्रेट को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ, जस्तै कुनै न कुनै सतह को उल्टो पोलिश र यसलाई चिकनी। तसर्थ, चयन र रंग उपकरण को उपयोग विशिष्ट निर्माण वातावरण को अनुसार निर्धारित गर्न को लागी आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, भित्ता मा चित्रकला एक रंग, स्यान्डपेपर, रोलर ब्रश, र मिक्सर को आवश्यकता छ। जब काठ उत्पादनहरु चित्रकला, ब्रश, ठीक sandpaper, स्प्रे बन्दूक, आदि छान्नुहोस्।
रंग उपकरण को उत्पादनहरु चित्रकला को एक समारोह छैन। वास्तव मा, उनीहरु अझै पनी धेरै क्षेत्रहरु मा प्रयोग गरीरहेछन्, जस्तै रासायनिक उद्योग, मेसिनरी, खाना, र इलेक्ट्रोनिक्स।
Perching चाकू एक उपकरण प्राय चित्रकारहरु द्वारा प्रयोग गरीन्छ, प्रयोग गर्न सजिलो, स्क्रैप, फावड़ा, रंग, भर्न, व्यापक रूप मा निर्माण को साथ साथै जीवन मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
लामो रोल, मध्यम कपाल, र छोटो hair.It ठूलो क्षेत्र को रंग को रोलिंग कोटिंग को लागी एक उपकरण हो: रोलर ब्रश को रूप मा पनी रोलर, तीन प्रकार मा विभाजित छन्।
कागज टेप एक रोल आकार चिपकने टेप बनावट कागज बनेको छ र मुख्य कच्चा माल को रूप मा दबाव संवेदनशील चिपकने, बनावट कागज मा दबाव संवेदनशील चिपकने को साथ लेपित, र अर्को पक्ष मा विरोधी चिपकने वाला सामग्री संग लेपित।
चीन मा एक पेशेवर रंग उपकरण निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ रंग उपकरण। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक रंग उपकरण लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।